Amasu Wokumisa i-Malware Pop-Ups nogaxekile - Uchwepheshe we-Semalt
Ama-pop-ups nogaxekile ukuhlangana okuvamile ekusetshenzisweni kwe-inthanethi yanamuhla. Ama-popup angase avele ezinkampanini ezisemthethweni, ezinesizathu esiqondile nesizathu. Noma kunjalo, amanye ama-pop-up angase avela ku-Malware noma ezinye izinhlobo zeTrojans, okungenzeka zibe khona ohlelweni. Noma ngabe yikuphi umthombo, kufanele uphathe ukusondelana ngokunakekelwa. Ezinye zazo zingaqukatha ama-virus, angaqeda ukwenza imisebenzi eminingi embi kumuntu ohlukumezekile.
Ngakolunye uhlangothi, uNik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo YokuThengela Amakhasimende Semalt , uthi ugaxekile kuyinkinga evamile ebhekene nabasebenzisi abaningi be-imeyili. Imilayezo yogaxekile ivela kubantu abangase babe nezinhloso ezimbi kulesi sisulu. Ezimweni eziningi, ugaxekile uqukethe ama-Trojane avela ema-imeyili awo kanye nezinye izixhumanisi ezilimazayo. Kwezinye izimo, abantu bathumela imilayezo equkethe ogaxekile ukuze bagqekeze ikhompuyutha yesisulu bese beyisebenzisa idatha yabo.
Ukuthi ama-Pop-ups no-Spam asebenza kanjani nge-Malware asebenza
I-Malware ingaba khona kwi-popup ye-imeyli yogaxekile. Kwezinye izimo, ezinye i-malware esivele ikhona kukhompyutheni ingabangela amanye ama-pop-ups. I-Malware ingaba ikhodi engaba khona emzimbeni womyalezo we-imeyili. Ngaphezu kwalokho, ama-imeyli ogaxekile angakha futhi i-malware ngendlela abaqhuba ngayo izinhlelo zabo. Isibonelo, abasebenzisi be-Microsoft Outlook bangaba nokuhlaselwa kokuhlaselwa uma bebuka izithombe ezitholakala kukhodi yabo.
Ukuchofoza ukuvota kungasho ukusungula isofthiwe ye-spyware. I-Popups ingafika ngezindlela ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, bangakwazi ukukhanya njengezaziso zesinkwa esibukweni; i-cursor yegundane phezu kwemenyu noma ngisho nokuhlaselwa kwezikhangiso ezivame kakhulu. Kungabangela izikhangiso eziningi ezivelayo. Noma ngabe yiluphi uhlobo lwe-malware, kubalulekile ukuba ungayinqamuli. Ukuchofoza iThrojani kungabangela izikripthi ezihlukahlukene, ezingenza eziningi
Izindlela zokuvimbela i-Malware
Kubalulekile ukuqinisekisa ukuphepha lapho usebenzisana nama-imeyili. Isibonelo, kubalulekile ukuthi ungavuli okunamathiselwe noma imiyalezo evela emithonjeni engacacile. Ngaphezu kwalokho, abanye abathumeli badumo abadumile ababazi abahlinzeka nge-imeyili. Ungamukeli izinhlinzeko zesikhathi esisheshayo futhi uthole amacebo asheshayo okucebile. Lezi ezinye zezindlela ezishibhile ezizisebenzisayo zokubamba abantu. Okokugcina, ungachofozi izixhumanisi ezikhona kuma-imeyili ogaxekile njenge-inkinobho yokuzikhipha ohlwini. Lephutha liqinisekisa kuphela ukufaneleka kwe-imeyili yakho kubaduni, ukuvula iminyango yokuhlaselwa okuqhubekayo.
Ukuvimbela ama-pop-ups nomonakalo wabo
Ukuvota okuningi kuvela ngenxa yethonya lenye isofthiwe ye-spyware. Ngenxa yalokho, kubalulekile ukuqeda ezinye ze-spyware, ezingabangela ukuphuma kwe-pop-ups. Isibonelo, gwema ukuchofoza noma yikuphi ukuphuma kwe-pop-up. Ungalokothi uzame ukuvala i-popup ngokuchofoza inkinobho yayo yokuvala. Kunalokho, khansela itreyi yesistimu.
Ukubuyekezwa kwesistimu yokusebenza, kanye nesofthiwe ye-anti-spyware, kungasho impumelelo enkulu. Isibonelo, isofthiwe elwa ne-spyware ingagcina ezinye zegciwane ezikhona ohlelweni. Kubalulekile ukwandisa izilungiselelo zokuphepha zesiphequluli. Ukugcina amawebhusayithi okuphepha okungacaci kungasindisa umuntu ekuhlaselweni kwe-malware.